မယ်လိုဒီမောင်၏ ငြိမ်းချမ်းသံစဉ်: Online Extension of Short Term Visit Pass (e-XTEND) in SG
Online Extension of Short Term Visit Pass (e-XTEND) in SG
ဒီနေ့မနက်တင် အွန်လိုင်းကနေ ဗီဇာသက်တမ်းတစ်လတိုးပေးဖို့ တင်လိုက်တယ်။ မနက်ဖြန်ကျရင်တော့ အိုကေမကေ သိရမယ်။ အိုကေမှာပါ။ ပုံမှန်အတိုင်းတော့ ဘယ်သူမဆို အိုကေတာပဲလေ။ အွန်လိုင်းကနေ လှမ်းတင်ရုံနဲ့ရတာဆိုတော့ တော်တော်အဆင်ပြေတာပေါ့။ ICA ကို ကိုယ်တိုင် သွားတိုးစရာမလိုလို့ ကယိကထမများတော့ အလုပ်ရှုပ်သက်သာတယ်။ အချိန်မကုန်ဘူး။ သွားလာစရိတ်မကုန်ဘူး။ ဘယ်သူ့မျက်နှာမှလဲ ကြည့်ဖို့လိုဘူးပေါ့။ ၁၂ရက်နေ့ကျ သက်တမ်းကုန်မှာဆိုတော့ တစ်ပတ်လောက်ကြိုလုပ်ဆိုလို့ ဒီနေ့ လုပ်လိုက်တာလေ။ website address မှာ http://www.ica.gov.sg လို့ရိုက်ထည့်ပီးရင် ညာဘက် side bar မှာ eServices online application for ဆိုပြီးရှိတယ်။ အဲဒီအောက်က Extension of Short Term Visit Pass (e-XTEND) ဆိုတဲ့လင့်ခ်မှာ ကလစ်နှိပ်ပြီးရွေး။ နောက်တစ်မျက်နှာကူးသွားရင် စာမျက်နှာအောက်ဆုံးနားမှာ Click here if you areaforeigner applying for extension. ဆိုတဲ့အောက်က individual ဆိုတာလေးကိုထပ်နှိပ်ပြီး နောက်တစ်မျက်နှာထပ်ကူး။ အဲဒီမှာ ရက် ၃၀ တိုးတာလဲရှိတယ်။ ရက်၉၀ ထိတိုးချင်လဲရတယ်။ ပုံမှန်အနေနဲ့ကတော့ ရက် ၃၀ပါပဲ။ တကယ်လို့ ဆေးကုတာဖြစ်ဖြစ်၊ အမျိုးတော်စပ်သူ PR သို့မဟုတ် Singaporean ရှိတာပဲဖြစ်ဖြစ် အထောက်အထားတွေပြနိုင်ရင်တော့ ရက် ၉၀ထိ တိုးလို့အဆင်ပြေတာပေါ့။ ကျမကတော့ up to 30days ကိုပဲ နှိပ်လိုက်ရတယ်။ ဘာတွေဖြည့်ဖြည့် space မခြားပဲဖြည့်ရတယ်။ ဖြည့်ဖို့လိုတာတွေက နာမည်အပြည့်အစုံ(passport မှာပါတဲ့နာမည်)၊ မွေးသက္ကရာဇ်၊ ကျားလားမလား၊ passport no. နဲ့ expired date၊ ပြီးတော့ DE card no. ဆိုတာ White card မှာပါတဲ့ bar code no. လေးဖြည့်ရတယ်။ ပြီးရင် proceed ကိုနှိပ်လိုက်ရုံပဲ။ acknowledge form လေးထွက်လာတယ်။ print ထုတ်ချင်လဲရတယ်။ ဒါပေသိ နက်ဖန် extension approved letter လေးထွက်မှပဲ print ထုတ်ပီးသိမ်းထားလိုက်တော့မယ်။ Approved ဖြစ်မဖြစ် check လုပ်တာလဲလွယ်ပါတယ်။ စောစောက up to 30days နှိပ်ရတဲ့စာမျက်နှာကိုလာပြီးပဲ အဲဒီအောက်က status enquiry ကိုနှိပ်ပြီး တောင်းတဲ့အချက်တွေပြန်ဖြည့်ပြီး proceed နှိပ်ရုံပဲလေ။ဒီလို အွန်လိုင်းကနေ extension တိုးတာလေးကို သိပြီးသားလဲဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာပါ။ရန်ကုန်မှာရှိနေတဲ့ (အစတုန်းက အတူတူ လာဖြစ်မယ်ထင်ပြီး ကျန်နေခဲ့တဲ့) သူငယ်ချင်း မောင်လေး တစ်ယောက်က အစ်မ ရန်ကုန်မှာ ပါတ်စပို့လုပ်တာ ဗီဇာဘယ်လိုလျှောက်တာကအစ လေဆိပ်မှာ ICA မှာဘာတွေအမေးခံရတယ်၊ အိမ်ငှားဖို့ကြိုစီစဉ်တာနဲ့ ဖုန်းဝယ်တာအဆုံး အကုန်လုံးကို ပို့စ်တင်ပြီး ပြောပြပါလားလို့ မေးထားလို့ ဒီပို့စ်လေးအရင်တင်ဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့ အချိန်ရမယ် အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်တော့ အဲလိုပို့စ်လေးတွေလဲ မြန်မြန်တင်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားပါ့မယ်လေ။ဒီအကြောင်းနဲ့ပါတ်သက်ပြီး ကိုလူအေးကွန့်မန့်မှာရေးပေးသွားလို့ သူ့ပို့စ်လေးပါ သွားဖတ်ကြည့်ဖို့ ဒီမှာ ကိုလူအေးရေ ရှဲ့ရှဲ့ဗျို :)
ပြည့်စုံတဲ့ Info လေးပါ။ Online-Extension တိုးဖို့အတွက် အနည်းဆုံးဗီဇာ သက်တမ်း (စနေ၊ တနင်္ဂနွေ မပါဘဲ) ၂ ရက် ကျန်ဖို့ လိုပါတယ် ဆိုတာလေးပါ ထပ်ဖြည့်လိုက်ရင် ပိုပြီး ပြည့်စုံမလားလို့ဗျာ။ တစ်ခါတစ်ခါ သက်တမ်းတိုးဖို့ကို မေမေ့လျော့လျော့ နေရင်းနဲ့ နောက်ဆုံးကျန်တဲ့ ၂ ရက်ကလည်း စနေ၊ တနင်္ဂနွေတွေ ဖြစ်နေတာမျိုး ကြုံရတဲ့အခါ မလိုလားအပ်တဲ့ ဆုံးရှုံး နစ်နာတာတွေ ဖြစ်ကုန်ကြရောဗျာ။ ဒီနေရာမှာ တစ်ခါရေးဖူးပါတယ်။ လာတော့ဖတ်ဖြစ်တယ်။ Comment ရေးဖြစ်တာ ဒါ ပထမဆုံးပဲဗျို့။
Thanks for sharing! By the way, are you huntingajob or visiting or on holiday in Singapore?
hi steve,All of them. hehe :)
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မယ်လိုဒီမောင်ရေ။ ဒါလေးကြည့်ပြီး သက်တမ်းတိုးလိုက်တာ အားလုံးအဆင်ပြေပါတယ်။
>>kaungmyatဟုတ်ကဲ့ ကွန့်မန့်လေးရေးပြီး အဆင်ပြေကြောင်းပြောသွားတာ ဖတ်ရလို့ ဝမ်းသာမိပါ၏